Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseCzech Republic Ama-Tomas Soucek Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Tomas Soucek Biography yethu icacisa ngeNdaba yakhe Yobuntwana, Ukuphila Kwasekuqaleni, Abazali, Impilo Yothando (Intombazane, Umfazi), Amaqiniso Womndeni, Ukuphila Komuntu Nempilo Yakhe. Kafushane nje, kungukuhlaziywa okuphelele kwendaba yokuphila kwakhe kusukela eminyakeni yakhe yokuqala kuya lapho eba inkanyezi yebhola.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali wasemuva osebenzayo onazo zombili izimfanelo zokuvikela nokuhlasela. Kodwa-ke, ababaningi abafunde i-Biography kaTomas Soucek enengqondo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Indaba Yengane KaTomas Soucek:
Okwabaqalayo beNdaba yezeMpilo, umgcini webhola njena UPetr Čech izindiza ezivela The Czech Republic. UTomas Soucek wazalwa ngosuku lwe-27 kuFebhuwari 1995 endaweni yaseCzechia edolobheni laseHavlíčkův Brod. UTomncane omncane wazalelwa abazali amagama abo angaziwa namanje ngesikhathi sokubhala i-biography yakhe.
Imvelaphi Yomndeni kaTomas Soucek:
Ngenxa yababukeli bebhola ebholeni, ukubiza amagama kanye negama lokugcina, akukho mibuzo noma ukungabaza ngobuzwe bakhe. Ngaphezu kwalokho, izimpande zomndeni webhola lezinyawo zigijimisa kakhulu ezweni lakhe lokuzalwa - Czech Republic.
Ukhula kweminyaka kaTomas Soucek:
Ubuwazi ukuthi uSoucek osemncane wakhulela ezweni lakhe lokuzalwa eHavlíčkův Brod? Ukukhula edolobheni, uSoucek wayedude ekhanda kunontanga yakhe. Wayemkhulu futhi egijima futhi edlala ibhola esemncane kakhulu.
Isizinda somndeni kaTomas Soucek:
Kuyaqapheleka ukuthi abazali bakaTomas Soucek baba negalelo ekusizeni abe nothando lokugijima nokudlala ibhola. Eqinisweni, umama omncane kaSoucek owayaziwa ukuthi wayengumgijimisi wemashi oqeqeshiwe ngenkathi ubaba wakhe eyithanda ibhola. Bebabili, bobabili abazali banikeza uSoucek ukukhula okuhle okuphakathi ebangeni eliphakathi.
Ukuqala Kanjani Ibhola Lokuqala KaTomas Soucek:
U-Asides wathumela ingane encane ngaleso sikhathi esikoleni esihle, abazali bakaTomas Soucek babezimisele ngokuqiniseka ukuthi amandla akhe nothando lwayo lokugijima lwathola ukuqeqeshwa eklabhini yasekhaya - I-FC Slovan Havlíčkův Brod (2001-2004).
Ngesikhathi uSoucek eneminyaka engu-10 ubudala, waqala ukuziqeqesha noSK Slavia Praha. Ikilabhu laliqhele ngamakhilomitha amaningi ukusuka eHavlíčkův Brod. Cha, ubonga ibanga, uSoucek waya ezitimeleni ezimbili nje nomdlalo masonto onke. Kamuva wayithola indawo esikoleni sebhola futhi waqala ukuziqeqesha njalo.
Iminyaka Yokuqala KaTomas Soucek Ebholeni Lokunakekela:
KwakuseSK Slavia Praha lapho uSoucek echitha khona iminyaka eminingi yomsebenzi wakhe webhola - cishe iminyaka eyishumi phakathi kuka-2004 no-2014 - amakhono okwenza amakhono manje okuyisimo sakhe sokudlala.
Lapho isikhathi silungile, i-football prodigy yathatha uhambo olukhulu lokuya eSlavia Prague lapho enza khona udoti wakhe weligi futhi wanambitha ibhola leqembu lokuqala. Kodwa-ke, akakwazanga ukuqinisa isikhundla sakhe neqembu lokuqala.
Tomas Soucek's Biography - Road To Fame Story:
Kwakuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuthi uSlavia Prague aqale ukuthumela uSoucek ngemalimboleko kwamanye amakilabhu. Owokuqala kwakuyiViktoria Žižkov lapho isidlali esincane singazange senze umthelela ngaphambi kokubuyela eklabhini yakhe yabazali.
Ngesizini ka-2016 kuya ku-17, uSoucek waphulukana nezikhundla zakhe neqembu lokuqala likaSlavia Prague wase ebolekisana noSlovan Liberec ngesikhathi ewindla lokudlulisa ebusika. Yize abekiwe abuyisa iklabhu yabazali bakhe lapho eqeda ukubolekwa imali, owokugcina bekusafanele azwakale ngokubolekwa kwakhe ngemalimboleko.
Ngenkathi uSoucek ejoyina uhlangothi lwePremier League oluya eWest Ham kwisivumelwano sokubolekwa imali okokuqala ngoJanuwari 2020, umsebenzi wakhe wavele waqala ukweqa. Yize inkontileka ibingowokuqala uSoucek engaphandle kweRiphabhulikhi yaseCzech, washesha ukuzivumelanisa nebhola lesiNgisi futhi waba nomthelela omkhulu empumalanga yeLondon.
Akubanga sikhathi esingakanani waba yintandokazi yabalandeli futhi waqhubeka nokusiza uhlangothi lwayo ukuthi luqhubeke lucishe lukule ndawo ngokushaya amagoli amaningi nokukhipha inqwaba yezimpawu ezibalulekile. Ngokushesha phambili esikhathini sokubhala, uTomas ubonwa ngabalandeli abaningi njengabasha UPavel Nedved.
Abathandi bebhola abakwazi ukulinda ukuthi umdlali wasemuva ozivikelayo asayine unomphela eWest Ham ngenxa yezikhathi eziningi anikeze ikilabhu amathemba okusinda. Abanye, njengoba besho, umlando.
Mayelana nentombi kaTomas Soucek kanye nezingane:
USoucek usebudlelwaneni bomshado obujabulisayo nentombi yakhe uNatalia. Akukaziwa okuningi ukuthi ama-lovebird aqala nini ukuqomisana. Kodwa-ke, banesiqiniseko sokuthi babe bendawonye iminyaka eminingi ngaphambi kokuqala komdlali wasemuva ozivikelayo eWest Ham.
Hlangana Umndeni KaTomáš Souček- Unkosikazi Wakhe nendodakazi. 📷: I-Instagram
Izinduna zothando zinendodakazi ndawonye. Igama lakhe nguTerezka. USoucek uthanda intombi yakhe nendodakazi yakhe kakhulu. Kanjalo, wenza konke okusemandleni akhe ukuthi abheke izintshisekelo zakhe njalo lapho enza izinqumo ezibalulekile zomsebenzi.
Impilo yomndeni kaTomas Soucek:
NjengamaSoucek amaningi ayimelayo ubusisekile ngokuba nomndeni owesekayo. Lapha, sikunikeza amaqiniso mayelana nabazali bakaTomas Soucek, izingane zakwabo kanye nezihlobo.
Hlangana nomndeni kaTomáš Souček. 📷: IPicuki
Mayelana nobaba kaTomas Soucek nobaba:
USoucek unabazali abancane abaziwayo. Yize kunjalo, siyazi ukuthi umama wakhe wayenomlando ocebile kwezemidlalo yembaleki njengomgijimikazi wemashi oqeqeshiwe. Ngakolunye uhlangothi, ubaba wakhe unezintshisekelo zokuqeqesha ebholeni. Ubonga bobabili abazali ngokushintshana ngokushayela yena ngokuqeqeshwa. Akumangalisi ukuthi umgcini webhola lezinyawo ubayisa kuyo yonke imidlalo emikhulu. Ubuye alwele kanzima ukuze enze lokho abekulindele.
Mayelana Nezihlobo ZikaTomas Soucek nezihlobo:
ISoucek isazokhuluma ngokuba nomfowethu noma udadewenu noma nini lapho enikeza ukulandisa kwendaba yakhe yempilo phakathi nezingxoxo. Njengoba kunje, kungenzeka ukuthi kungukuphela kwengane ezalwe abazali bayo. Ngokuphathelene nokhokho kanye nezihlobo zalo mdlali, akukho okuningi okwaziwayo ngogogo nomkhulu wakhe. Ngokufanayo, oomalume bakhe, omalume, umshana, umshana nabazala wakhe akwaziwa,
Impilo kaTomas Soucek:
Ukude kakhulu kweTchs Soucek's-pitch penchant ngokuba ngumvikeli omangalisayo nosongo lwezinhloso, amaqiniso nemibono maqondana negxathu lakhe lokuhlobanisa womabili avumelani futhi ayathandeka. Abalandeli nabadlali beqembu bavuma iqiniso lokuthi uqhutshwa ngokomzwelo, uthobekile futhi unobuhlakani.
Umdlali wasesiswini omhlaba umxhwele ogama lakhe leZodiac yiPisces wenza njalo imisebenzi embalwa edlulisa isasasa lakhe nokuzijabulisa kwakhe. Kubandakanya ukulalela umculo, ukubhukuda, ukuhambela izinkawu (bheka ngezansi) nokuchitha isikhathi esihle nomndeni nabangane.
I-Tomáš Souček Imininingwane Yempilo Yomuntu. 📷: I-Instagram.
Indlela kaTomas Soucek:
Ngokuphathelene nendlela uTomas Soucek enza ngayo futhi ayisebenzise ngayo imali yakhe, inani lakhe lenzuzo liyabuyekezwa kusukela ngoJulayi 2020. Noma kunjalo, akunakuphikwa ukuthi uhola imiholo ebalulekile kanye nemholo ngokudlala ibhola lezinyawo eziphezulu.
Ngaphezu kwalokho, lo mdlali wasemuva ozivikelayo wenza imali engenayo evela ekuvumeleni futhi nakanjani ngeke abe nenkinga ngokuphila impilo enethezekile yabathandi bezinyawo abanezimoto ezibizayo egalaji ezindlini zabo nasezindlini zabo.
Amaqiniso kaTomas Soucek:
Ukugoqa indaba yethu yobuntwana kaTomas Soucek kanye namaqiniso e-biography lapha kunamaqiniso amancane noma awaziwa ngokungenangqondo ngomdlali wasemuva ozivikelayo.
Iqiniso # 1- Tomas Soucek Salary:
ISIKHUMBUZO / ISONTO
Imali etholwa ngamaphawundi ⟨⟩⟩
Imholo kuCzech koruna (CZK)
Ngonyaka € 3,585,360 $ 4,097,529 £ 3,260,281 I-95,508,066 CZK
Ngenyanga € 321,530 $ 341,461 £ 271,690 I-7,958,755 CZK
Isonto ngalinye € 74,000 $ 78,678 £ 62,529 I-1,788,484 CZK
Ngosuku € 10,571 $ 11,240 £ 8,932 I-255,497 CZK
Ngehora ngalinye € 440 $ 468 £ 372 I-10,654 CZK
Ngomzuzu € 7.34 $ 7.8 £ 6.2 I-177 CZK
Ngekhondi € 0.12 $ 0.13 £ 0.10 I-2.9 CZK
Yilokho UTomas Soucek uzuze selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Iqiniso # 2- Izilinganiso ze-FIFA zikaTomas Soucek:
ISoucek ine-FIFA 2020 iyonke isilinganiso simi kumaphuzu angama-81 ngoJulayi. Akusho nje ukuthi yindaba yesikhathi ngaphambi kokuthi isilinganiso sakhe silingane noCésar Azpilicueta noWilfred Ndidi bobabili abalinganiswe abangama-84.
Iqiniso # 3- Yikuphi Inkolo uTomas Soucek akwenzayo?
Umdlali wasemuva ozivikelayo usazokunikeza izinkomba ngokuqondene nezinkolelo zakhe ezingokwenkolo kuma media social, izingxoxo kanye nasendlini yokudlala. Yize kunjalo, izingqinamba lezi zimncoma kakhulu ukuthi abe ngumkristu.
Iqiniso # 4 Trivia:
Uyazi ukuthi unyaka wokuzalwa kukaSoucek - 1995 ubalulekile ekuthuthukisweni kobuchwepheshe obukhulu kanye nemicimbi yokuzijabulisa? bekungunyaka lapho kumenyezelwa ifomethi yemidiya yokugcina ama-DVD. Emcimbini wokuzijabulisa, ngo-1995 kwaba unyaka amafilimu afana nePocahontas noBatman ashaya ngawo amakhamera.
Iqiniso # 5- Wiki:
Igama eligcwele UTomas Soucek
Usuku lokuzalwa Usuku lwe-27 kuFebhuwari 1995
Indawo yokuzalwa I-Havlíčkův Brod eCzech Republic
Ukudlala Isikhundla Midfielder evikelayo
Izingane UTerezk (indodakazi)
Imali engenayo N / A
Ukuphakama 6 izinyawo, 4 inches.
Ngiyabonga ngokufunda le ndatshana enokuqonda ku-biography kaTomas Soucek. Siyethemba ukuthi ukubhalwa kukwenza ukholwe ukuthi uyakufanelekela ukunakwa ngokufanele ngenxa yemigudu ayenzile ebholeni.
KwaLifebooger, siyaziqhenya ngokuletha ama-bios alungile futhi anembile. Uma uthole noma yisiphi isitatimende esivumayo noma esingafanele ngesikhathi sokuphoqelelwa, sicela wenze kahle ngokuxhumana nathi noma ushiye amazwana.
Isici Somfanekiso UTomáš Souček e-EURO 2020 Qualifying Round Czech Republic-Montenegro ngo UTadeáš Bednarz ilayisensi ngaphansi kwe I-Creative Commons- CC BY-SA 4.0.